किन तपाईंको ईमेलहरू ईनबक्समा बनाउँदैनन्? | Martech Zone
हामीले भेट्ने केही कम्पनीहरूले उनीहरूको सबै आन्तरिक सर्भरहरूबाट प्रणाली सन्देशहरू सहित ईमेल पठाउँछन्। तिनीहरू मध्ये धेरैले पनी ईमेलहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुगेको छ कि छैन भनेर पक्का छैन ... र तिनीहरू मध्ये धेरै छैन। कि मान्नु हुँदैन किनभने तपाईं पठायो एक ईमेल जुन यसले वास्तवमा इनबक्समा बनाउँदछ।
यो किन त्यहाँ एक सम्पूर्ण उद्योग छ ईमेल प्रदायकहरू। ईमेल एक शक्तिशाली उपकरण हो - प्राय जसो अन्य कुनै पनि अनलाइन माध्यमको तुलनामा उच्च फिर्ताको परिणाम। यदि तपाईंको कम्पनीले अनुभव गरिरहेको छैन भने, तपाईंको ईमेल बाहिर गइरहेको हुन सक्छ - तर वास्तवमा पढिएको वा खोलेको छैन।
उद्योग ब्ल्याकलिस्टहरू - धेरै जसो इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) उद्योग कालोसूचीमा सदस्यता लिन्छन्। Spamhaus एक प्रख्यात कालोसूची सेवा हो। स्प्याम्हास जस्तो संगठनहरूले उजुरीको मात्रा मोनिटर गर्दछ कि ब्यापार हुन्छ र थ्रेसोल्डहरू कम कम हुन्छन्। यदि तपाईंको कम्पनीले कालोसूचीमा फेला पारेमा, प्रत्येक ISP ले तपाईंको IP ठेगानाबाट सबै ईमेलहरू रोकिरहेको हुन सक्छ। त्यहाँ सयौं कालोसूचीहरू छन् - त्यसैले उत्तम शर्त भनेको तपाईं कुनैमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न ब्ल्याकलिस्ट निगरानी सेवाको सदस्यता लिनु हो साथ साथै कसरी तिनीहरूबाट हटाउने भन्ने बारेमा सहायता पनि पाउनु हो।
ISP कालोसूचीहरू - याहू जस्तो इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू! AOL र अन्य पनि आफ्नै कालोसूचीहरू बनाए। त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् तपाईको कम्पनीलाई प्राप्त गर्ने सहित उच्च छुट वितरण दरहरू सुनिश्चित गर्न श्वेतसूची तिनीहरुसँग। यदि तपाईं आफ्नै प्रणालीबाट ईमेलहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ भने, आईटी टोलीलाई चुनौती दिन निश्चित गर्नुहोस् आवश्यक सावधानीहरू ठाउँमा।
सफ्ट बाउन्स - कहिलेकाँही ईमेल इनबक्सहरू भरिन्छन् ताकि होस्ट वा प्रदायकले ईमेल स्वीकार्दैनन्। तिनीहरूले बाउन्स सन्देश फिर्ता पठाउँछन्। यसलाई ए भनिन्छ नरम बाउन्स। यदि तपाईंको प्रणालीसँग सफ्ट बाउन्स ह्यान्डल गर्ने कुनै माध्यम छैन भने, तपाईंले अर्को ईमेल पठाउनुहुने छैन जब प्रयोगकर्ताले उनीहरूको इनबक्स खाली गर्दछ। यसलाई बाउन्स व्यवस्थापन भनिन्छ र यो धेरै जटिल छ। डेलिभरेबिलिटी दरहरू अधिकतम बनाउन, ईमेल सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक परेमा दर्जनौं पटक ईमेलहरू पुन: पठाउने प्रयास गर्नेछन्।
हार्ड बाउन्स - यदि ईमेल ठेगाना अब मान्य छैन भने, प्रदायकले प्रायः सन्देश फिर्ता पठाउँदछ। यदि तपाईंको प्रणालीले त्यो जानकारीको साथ केहि गर्दैन भने र तपाईं ठेगानामा पठाउन जारी राख्नुहुन्छ भने, तपाईं समस्यामा पर्नुहुनेछ। खराब ईमेल ठेगानाहरूमा सन्देशहरू पुन: पठाउनु ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको नराम्रो पक्षमा पुग्न सजिलो तरीका हो। तिनीहरूले तपाईंको सबै ईमेल स्पाम फोल्डरमा डम्पिंग सुरू गर्दछन्।
सामग्री - ईमेल विषय लाइनहरु र सामग्रीमा केहि शब्दहरू हुन सक्छन् जुन स्प्याम फिल्टरहरू ट्रिगर गर्दछ। तपाईंलाई थाहा छैन, तपाईंको ईमेल सीधा जंक फोल्डरमा पठाइन्छ र तपाईंको प्राप्तकर्ताले यसलाई कहिले पढ्दैन। अधिकतर ईमेल सेवा प्रदायकहरू (र केहि बाह्य उपकरणहरू) का सामग्री विश्लेषण फिल्टरहरू छन्। तपाईंको सन्देशलाई मान्य गर्न यो राम्रो विचार हो यो इनबक्समा यसलाई बनाउने सम्भावना सुधार गर्न।
त्यहाँ यि उपकरणहरूमा बैंकलाई तोड्नु आवश्यक पर्दैन। जब ईमेल सेवा प्रदायकसँग साइन अप हुन हजारौं डलर खर्च हुन सक्दछ, तपाईं केहिमा अप्ट इन पनि गर्न सक्नुहुनेछ ईमेल उपकरण सेवाहरू। ब्ल्याकलिस्ट मोनिटरिंगमा उनीहरूको मूल्य निर्धारण, उदाहरणका लागि, एक महिना $ १० भन्दा कम हो!
पीपीसी ब्रान्ड अभियानको साथ तपाईंको ब्रान्डमा लगानी गर्नुहोस्
सामग्री फिल्टरिंग केवल विषय रेखा भन्दा पनि गहिरो जान्छ। यदि तपाईं अत्यधिक सबै क्याप्स, बोल्ड, वा शरीर कोपी मा हाइपरलिंक को घनत्व को उपयोग गर्नुहुन्छ जुन सामान्य भन्दा बढि छ, तपाईं कबाड बक्समा सुस्त हुन सक्नुहुन्छ।